Mon Petit Avatar: Yangon Zoo
Posted by Mon Petit Avatar at 12:58 PM
အချဉ်ပေါင်းတွေကို ရိုက်ထားတာလေးတွေ ကြိုက်တယ်။
စားချင်လိုက်တာ အဲ့လို ဇီးသီး
You are suchagreat and loving aunt. I can sense your warm love and care towards your nephew. Your nephew's photo is so cute. Want to eat plums, mouth-watering hehe :)
အပြုံးပန်း ရုံးပတီသီးလေး Baby နဲ့ Rose ရေ လာလည်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်
အချင်ပေါင်းတွေတွေ့ရင် ငယ်ငယ်တုံးက မုန့်ဖိုးတွေကို အဲဒါတွေချည်းဝယ်စားပြစ်တာသတိရမိသေးတယ်။
တိရိစ္ဆာန်ရုံက ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ချင်နေခဲ့တာ..၊ ၆ နှစ်ဝန်းကျင်တုန်းက တစ်ခါလားပဲ ရောက်ဖူးပြီး မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး၊ ဆင်လိမ္မာ၊ မြွေလိမ္မာ အကတွေ ကြည့်ခဲ့ရတာ မှတ်မိတယ်၊ ဒီလို အန်တီတစ်ယောက်ရှိတာ တူလေး အတွက် ကံကောင်းတာပေါ့....။း)
ဒီလို အရွယ်တူတစ်ယောက်ထဲရှိ ပြီး ကျန်တဲ့ တူ တူမတွေကြီးကုန်တာလဲ ဒီကအန်တီလဲကံကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်။
လပြည့်ရိပ် နဲ့ Iora ရေ ကိုယ်လဲ အချဉ်ပေါင်းလဲစားချင် ငယ်ဘဝကိုလဲသတိရတယ်။